Aung Win Hein (Noble): 04/01/12
"စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်များ...(၁၆)..."
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်(၆)ချက်…
(၁) Researchers have found that happy people tend to have high self-esteem.
စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ကျေနပ်တဲ့စိတ် ပိုရှိတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တော်တယ်လို့ယူဆတယ်။ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆတယ်။
(၂) The best predictor of general life satisfaction is not satisfaction
with family life,friendship, or income, but satisfaction with self.
ဘဝကို ကျေနပ်မှုဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းချင်ရင်
အကောင်းဆုံးအချက်က Satisfaction with self
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လောက် ကျေနပ်သလဲဆိုတဲ့ အချက်က အကောင်းဆုံးပဲ။
Family life - မိသားစုဘဝက အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး။
Friendships -မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းက အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး။
Income - ဝင်ငွေက အကောင်းဆုံးအချက် မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါကိုကြည့်ရင် တခြားအချက်တွေ ဘယ်လောက်ပဲ ပြည့်စုံနေပါစေ၊
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မကျေနပ်တဲ့သူ အားမရတဲ့သူဟာ စိတ်ချမ်းသာမှု ပြည့်ပြည့်ဝဝ မရနိုင်ဘူး။
ကိုယ်နဲ့အမြဲတန်း ရှိနေတာ ကိုယ်ပဲ။ ဘယ်သွားသွား အမြဲ ကိုယ်နဲ့ပါနေတယ်။
တခြားသူတွေက တစ်ခါတစ်လေ တွေ့ရတယ်။ အမြဲတန်း ကိုယ်သွားလေရာ မလိုက်နိုင်ဘူး။
ကိစ္စတစ်ခု အဆင်မပြေတာ ခဏပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ကျေနပ်တာက ခဏမဟုတ်ဘူး။
တခြားကိစ္စတွေ တခြားလူတွေဟာ အပြင်မှာပဲ ရှိတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကတော့ ခွဲသွားလို့ မရဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ကျေနပ်နေတဲ့သူက သွားလေရာမှာ
ကျေနပ်စရာက ကိုယ်နဲ့အတူ ပါနေတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့သူက သွားလေရာမှာ
မကျေနပ်စရာက ကိုယ်နဲ့အတူ ပါနေတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် ချစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်နားလည်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် တန်ဖိုးထားဖို့ သိပ်အရေးကြီးတယ်။
ဘယ်သူမှ အထင်မကြီးချင်ရင် နေပါစေ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ်တော့ အထင်မသေးဖို့ လိုတယ်။
လူတိုင်းဟာ သူ့နည်းနဲ့သူ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သူတွေပဲ ဆိုတာ ကို လူတိုင်းနားလည်ဖို့ လိုတယ်။
ကလေးတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် အထင်မသေးအောင်
လူကြီးတွေက ဆက်ဆံရေးမှာ သတိထားဖို့ လိုတယ်။
ကျောင်းမှာ ဆရာ ဆရာမတွေက ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေကို
ဆက်ဆံတဲ့အခါ မလေးမစား မပြောသင့်ဘူး။
လေးစားတယ် ဆိုတာနဲ့ ရိုသေတယ် ဆိုတာ နဲ့ အဓိပ္ပာယ်မတူဘူးနော်။
ရိုသေရမယ်လို့ မဆိုလိုဘူး။ လေးစားရမယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။
လူတိုင်းကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်ရင် လူတိုင်းဟာ သူ့နေရာနဲ့သူ အရေးပါတယ်။
လေးစားစရာကောင်းတယ် ဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသား အသိအမှတ်ပြုဖို့ လိုတယ်။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အထင်သေးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဟာ
လူတိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
လူတွေကို စိတ်ချမ်းသာစေချင်ရင် တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့ ဆက်ဆံပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကိုယ် တန်ဖိုးထားတယ်။ ကျေနပ်တယ်။
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း ကိုယ့်ကို တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာမယ်။
စိတ်ချမ်းသာဖို့လိုရင်းပါ (ဆရာတော်ဦးဇောတိက) စာအုပ်ကို ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါတယ်။
"စိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အချက်များ...(၁၆)...